PSJTV | प्रधानमन्त्री ओलीलाई सातपटक प्लाज्मा फेरेसिस गर्नुपर्ने, के हो प्लाज्मा फेरेसिस?
Sunday 15 December 2019 | आइतबार, २९ मङि्सर २०७६
प्रधानमन्त्री ओलीलाई सातपटक प्लाज्मा फेरेसिस गर्नुपर्ने, के हो प्लाज्मा फेरेसिस?
सिंगापुरमा स्वास्थ्य उपचार गराइरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सातपटक प्लाज्मा फेरेसिस गर्नुपर्ने भएको छ। ओलीको शरीरमा प्रत्यारोपण गरेको मिर्गौलामा बढेको एन्टीबडी झार्न प्लाज्मा फेरेसिस गर्न लागिएको खबर आजको नागरिक दैनिकले छापेको छ।
उनलाई दिन बिराएर सातपटक प्लाज्मा फेरेसिस गर्नुपर्ने भएको छ। ओलीलाई शुक्रबार पहिलोपटक फेरेसिस गरिएको छ। यही अबस्था रहने हो भने उनको सिंगापुर बसाइ एक महिनासम्म लम्बिन सक्ने उनीनिकट चिकित्सकको भनाई छ।
चिकित्सकका अनुसार प्रत्यारोपण गरेको मिर्गौलाको बिरुद्धमा बनेको एन्टीबडी निकाल्ने वा झार्ने प्रक्रियामा प्लाज्मा फेरेसिस उपचारविधि प्रयोग गरिन्छ।
चिकित्सक लोचन कार्कीका अनुसार मिर्गौलालाई कमजोर पार्ने एन्टीबडीसहितको प्लाज्मालाई निकालेर एन्टीबडीरहित प्लाज्मा फेर्ने उपचार विधिलाई प्लाज्मा फेरेसिस भनिन्छ।
यसरी पत्ता लाउन सकिन्छ क्यान्सर हुनु अघि नै लक्षण
के हो एपेन्डिसाइटिस? कस्तो अवस्थामा हुन्छ यो प्राणघातक?
मनसुन पुनः सक्रिय भएकाले देशभर बदलीसँगै वर्षा भइरहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । मनसुनी न्यून चापीय रेखाको पश्चिमी भाग औसत स्थानको आसपासमा रहेका कारण मनसुनी ...
नेपालले पहिलोपटक आफ्नो साख परीक्षण अर्थात् ‘कन्ट्री क्रेडिड रेटिङ’ गराउँदै छ । सरकारको योजनाअनुसार सन् २०१९ को अन्त्यसम्म अर्थात् आगामी पुससम्ममा नेपालको साखको स्तर निर्धारण भइसक्ने छ। वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न अपरिहार्य सर्त ...